संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै !! | सुदुरपश्चिम खबर
संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै !!
काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । आज सुनुवाइ हुने ३० वटामध्ये २६ निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ ।
तर प्रधानन्यायाधीशको इजलासले रिट निवेदनहरुमा उठान भएको विषयसमेत गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संवैधानिक इजालसमा पेस गर्न आदेश भएको हो । आज प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा कम्तीमा पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । (सगुन खबर बाट सभार)
काठमाण्डौमा आजदेखि खाद्यान्न पसल बन्द, खाद्यान्न चाहिएमा सम्पर्क गर्न प्रशासनको आग्रह
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाका विकल्पहरु बुझाइयो !!